Daawashada Kalandarka Mawduucaaga | Martech Zone
Arbaco, Juun 6, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Blogging iyo warbaahinta bulshada waa maaratoon lagu soo saaro waxyaabo qiimo leh maalin kasta dhagaystayaashaada. Ujeeddadu waa in la abuuro awood iyo nuxur ku filan oo aan haysanno akhristayaal, taageerayaal ama kuwa raacsan oo ugu dambeyn macaamiisha u beddelaya. Taasi waxay qaadataa wakhti, mararka qaarkood, markaa waa muhiim inaad isha ku hayso hadafka kaa horeeya. Hal dariiqo oo aad tan ku sameyn karto waa adiga oo ku daraya jadwalka maadada nidaamka maareynta maareyntaada.
Jadwalka mawduucyada ayaa kuu oggolaanaya inaad aragto qoraalladaada mustaqbalka si aad uga hor tagi karto baahiyaha istiraatiijiyaddaada guud. Isku-darka dhawaan waxay soo saartay jadwalka taariikhda ee cajiibka ah kaas oo u oggolaanaya maamulaha inuu helo aragti guud oo ku saabsan waxyaabaha ay ka kooban yihiin - oo ay ku jiraan waxyaabaha ay tahay inuu maamulku oggolaado Waad arki kartaa inaanan sifiican u shaqeyneynin wixii ku saabsan soo bixitaankii bishii hore!
Maadaama aan labadaba haysto Isku-darka blog iyo a WordPress blog, Waxaan ahaa cajiib ah haddii qof uu u dhisay muuqaal la mid ah WordPress… oo ay leeyihiin! Waa Kalandarka Tifatiraha WordPress.
Jadwalka Tifaftiraha WordPress ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad ku darto qoraallada sidoo kale jiido oo aad dhigto. Markaa hadaad tahay maareeyaha warbaahinta bulshada ee dadaalka badan, waxaad buuxin kartaa kalandarkaaga toddobaadyo kahor oo aad u xilsaari kartaa waxyaabaha ku jira isticmaaleyaashaada. Tani waa hab weyn oo lagu hubiyo inaad ku bixinayso baahiyaha istiraatiijiyad weyn oo wax ku ool ah!
Tags: Cilmi-baarista Suuqa Aasaasiga ahcilmi baarista koowaadtalo software
Mawduuca Grid v2
Jul 6, 2011 markay tahay 7:31 PM
Wanaagsan, waxaan raadinayay waddo aan sidan ku sameeyo barta ereygeyga. Websaydh wanaagsan sidoo kale habka.